Daawo: Muâ€™asasada Al-kataaâ€™ib Oo Baahisay Kalimad Uu Jeedinayo Sheykh Axmed Iimaan Cali. – Calamada.com
Daawo: Muâ€™asasada Al-kataaâ€™ib Oo Baahisay Kalimad Uu Jeedinayo Sheykh Axmed Iimaan Cali.
calamada April 1, 2017 5 min read
Muâ€™asasada Al-kataaâ€™ib ayaa baahisay Kalimad uu jeedinayo Sheykh Axmed Iimaan Cali oo ah hogaamiye Muhaajir ah oo ka mid ah masâ€™uuliyiinta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, taas oo uu sheekhu kaga hadlayo guulihii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta oo uu ku jiro weerarkii halyeeynimo ee Kulbiyow ee dhamaadkii bishii Jamaadul Awal ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidamada Saliibiyiinta ee Kulbiyow.
Kalimaddan oo la dhageysan karo muddo 17 daqiiqo ah, kuna baxeyso luuqadaha Sawaaxiliga iyo English-ka ayaa wuxuu Sheykh Axmed Iimaan wuxuu kaga hadlay wixii ka dhacay xerada ciidamada saliibiyiinta Kenya ee Kulbiyow ka dib markii halyeeyada katiibada Ashahiid Saalix Nabhaan ay iqtixaameen halkaas, Wuxuuna tilmaamay in mujaahidiinta uu Allaah ku maneystay guulweyn, islamarkaana ay halkaas ku laayeen cadow badan.
â€œDagaalkii Kulbiyow Wuxuu ahaa dagaal uu Allaah nagu siiyey gacanta sare oo aan kaga guuleysanay gaalada.
Waan galnay xerada cadowga, waxaan laynay gaallo badan oo iyaga ka mid ah, waana soo ganiimeysanay wixii agab iyo hub ahaa ee uu cadowga ka cararay. Qaar walaaladeena ka mid ahna Allaah wuxuu ku siiyey Shahaado, waxaan Allaah weydiisaneynaa in uu ka aqbalo shahaadadooda, sidoo kalena uu caafiyo walaaladii kale ee ku dhaawacmay dagaalkaâ€ ayuu yiri.
Kalimadan oo Sheykh Axmed Iimaan Cali uu ka horjeediyey ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan mujaahidiinta, ayaa sidoo kale madaxweynaha iyo shacabka Kenya u sheegay in halyeeyada askartooda kula dagaalamaya Soomaaliya gaar ahaan Katiibada Ashahiid Saalix Nabhaan oo laba jeer weerartay saldhigyada ciidankooda ay yihiin rag u Oomaan dhiigga gaalada, islamarkaana raadinaya Shahaado iyo raaligelinta Allaah, Isagoona tilmaamay in askarta katiibadaas ay galaan beycatul-mowt marka weerarayaan xeryaha iyo saldhigyada cadowga.
â€œWaxaan doonayaa in shacabka Kenya iyo madaxweynahooda Uhuru Kenyatta aan ogeysiiyo in marka katiibada Saalix Nabhaan ay galeyso ama iqtixaameyso xero uu cadowgu leeyahay in mid kasta oo askarteeda ka mid ah uu galay beycatul-Mowt.
Waxay diyaar u yihiin in ay weeraraan xeryaha cadowga xitaa haddii hal qof oo iyaga ka mid ah uusan dib u soo noqoneynin. Ujeedkeenuna waa guul ama shahaado. Taasi waa yoolka aan hiigsaneyno. Marka waa in ay ogaadaan in aysan wax walwal ah nagu heynin marka ay sheeganayaan in ay dileen qaar ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. Dila dhamaantood hadaad doontaan, wax qoomamo ama walwal ah naguma yeelanayo dilkooda. Tani waa nicmo uu Allaah nagu maneystay sababtoo ah waxaan hiigsaneynaa laba midkood. Waa Nasri ama shahaado. Imaa in aad na dishaan oo aan gaarno manzilada Shuhadada ama in aan idinka guuleysano oo aan hubkiina ganiimeysanoâ€ ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
â€œWaxaa muhiim ah in dadka Kenyaatigu ay fahmaan sababta aan u riyaaqsanahay. Anagu sidaad ogtihiin waxaan ku dhalanay dhulalka kufriga, waxaan ku soo waxbaranay iskuuladooda. Ma aynaan fahamsaneyn micnaha Al-Walaa wal Baraa. Gaallo ayaan saaxiibo la ahayn. Waxaan Allaah weydiisaneynaa in uu naga cafiyo arimahaas oo dhan. Laakiin hadda aad baan u riyaaqsanahay sababtoo ah jiilka soo socda ee mujaahidiinta iyo caruurtoodaba waa kuwo marka ay gaalada arkayaa ka dhex arka kaliya liifka ama mindaarka qorigooda. Waxaan heysanaa wiilal daâ€™yar oo hadda ciidankan ku dhexjira oo aanan weligood arkin gaalada, ilaa marka ay tooganayaan mooyee.
Marka kaliya ee ay gaal arkayaan waa marka uu kaga soo dhex muuqdo liifka qorigooda. Sidaas darteed gaaladu waa in ay ogaato in ay sugayaan musiibooyin isdaba joog ah oo ay kala kulmi doonaan gacmaha wiilashan daâ€™da yarâ€ ayuu yiri Sh. Axmed Iimaan Allaha xifdiyee.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Sheykhu sidoo kale sheegay in casrigan la joogo ay taariikhda gaalada lagu qorayo hubka mujaahidka, islamarkaana weerarada halyeeynimo ee mujaahidiinta ay galeen diiwaan buugaagta gaalada. Wuxuu yiri:
â€œDagaalkii Kulbiyow wuxuu galay diiwaanka iyo buugaagta taariikhda ee gaalada isagoo ka dhigan musiibo iyo balaayo aysan weligood hilmaami doonin. Hadda marka laga hadlayo gudaha Kenya, Xukuumada Jubilee iyo mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga waxay labadu ku jahawareersan yihiin in ay kala doortaan laba arin midkood oo kala: In Askartooda ku dhintaan halkaan iyo in ay ku dhintaan gudaha Kenya.
Xukuumadu waxay goâ€™aansatay in ciidamadu ay sii joogaan Soomaaliya ilaa geeridooda ay halkaas kula kulmayaan. Mucaaradkuna wuxuu dhankiisa qabaa in ciidamada laga soo celiyo Kenya, oo ay halkaas ku sugtaan masiirkooda sidaas darteed waxay ku wareersan yihiin labadaas arin midkey dooran lahaayeenâ€
Dadka Kenyaatiga iyo dowladooda ayuu sidoo kale u sheegay in ciidankooda ku sugan Soomaaliya aysan wax natiijo ah ku heynin halkan, Islamarkaana ay ku jiraan kaliya godad ay ka sameysteen xeryaha dhexdooda oo ay isaga jiraan ilaa laga gaarayo maalinta badalka markaas oo uu sheegay in laga soo bixiyo godadkii ay ku jireen dib loogu celiyo halkii laga keenay, islamarkaana aysan iyagu wax mushkilad ah ku heynin arintaas, ayna kala jecleen haddii ay ku dhintaan halkan Soomaaliya ah iyo haddii ay ku dhinteen dhulkooda.
â€œWaxaan rabaa in aan dadka reer Kenya u sheego, oo ay tahay in ay ogaadaan in waxa kaliya ee ciidankooda ay qabtaan marka ay joogaan xeryahooda Soomaaliya in ay tahay in ay godad ka qotaan xeryaha gudahooda oo ay dhex fariistaan, islamarkaana meelna kaga dhaqaaqi Karin. Halkaas ayey ku jiraan oo dharaar iyo habeen fadhiyaan ilaa laga gaaro xilliga kala badalka ciidanka. Marka la gaaro kala badalkana, godadka ayaa laga soo bixiyaa, ka dibna dalkooda ayaa dib loogu celiyaa. Anaguna si kasta oo ay noqotaba waxaan dooneynaa in ay halaagsamaan oo baabâ€™aan, Muhiim ma ahan hadey ku dhimanayaan halkaan Soomaaliya ah iyo hadey ku dhimanayaan dhulkooda, labaduba waan ku faraxsanahay.
Marka walaalayaal guushan uu Allaah nagu maneystay waxaa xaqiiqowday Aayadda horay u soo sheegay ee oraneysa: La dagaalama gaalada, Allaah ayaa gacmihiina ku cadaabayeeâ€
Halkan Hoose Ka Daawo Filimka Al-kataa’ib.
Previous: Faahfaahino Laga Helayo Qaraxyo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.
Next: Ciidamada Burundi Oo Gaari Looga Gubay Shabeelada Dhexe.
1 thought on “Daawo: Muâ€™asasada Al-kataaâ€™ib Oo Baahisay Kalimad Uu Jeedinayo Sheykh Axmed Iimaan Cali.”
Abu Dujanna says:
Allaahu Akbar….Allaah baa mahad iska leh. marka labaad Mujaahidiinta Islaamka ee gacantooda ku hallaagay Kufaartii Kiiniya ee Kurbiyow ayaa hambalyo iyo duco naga muddan.